Mayelana NATHI - Perfect Display Technology Co., Ltd.
EPHELELE BONISA TECHNOLOGY CO., LTD
I-Perfect Display Technology Co, Ltd. yasungulwa ngo-2006 futhi kusukela lapho sakha saba ngumkhiqizi oholayo wemikhiqizo yokubonisa ye-LCD ne-LED, kufaka phakathi ama-Gaming monitors, ama-CCTV monitors, ama-Public view monitors, ama-All-In-One PC, ama-Digital Signage kanye Ama-Whiteboard asebenzisanayo. Ngefektri engu-15,000 m2, imigqa emi-2 yokukhiqiza okuzenzakalelayo ne-1 esinamandla okukhiqiza amayunithi ayisigidi ngonyaka. Ngenxa yokwanda okuqhubekayo maduzane sizothuthela efemini entsha, enkulu kakhulu, okwandisa amandla ethu abe ngamayunithi angaphezu kwezigidi ezimbili ngonyaka
Sisebenzisa isamba esikhulu semali yethu Ocwaningweni Nentuthuko futhi siyaqiniseka ukuthi sinikeza ezinye zabaqaphi abahle kakhulu futhi sibonisa imikhiqizo etholakala emhlabeni wonke. Sihlala silwela ukusungula nokwenza ngcono umkhiqizo wethu, ngemikhiqizo emisha enikelwa njalo. Ochwepheshe bethu be-R & D abanolwazi basebenza njalo ekuklameni imikhiqizo oyidingayo futhi oyifunayo ikhasimende. Siphinde futhi sinikeze ngezinsizakalo ezigcwele ze-OEM ne-ODM, ngakho-ke uma udinga umkhiqizo othile siyaqiniseka ukuthi singakuklama futhi sikukhiqizele wona.
Siyaziqhenya ngokungabi eshibhe emakethe njengoba sikholwa ukuthi kufanele sakhe noma senze imikhiqizo ibe sezingeni, hhayi ngentengo! Unalokho engqondweni sisebenzisa kuphela izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme kakhulu, kusuka kumapaneli kuze kube kuya kuma-resistors.
Inkampani yethu izuze izindinganiso ze-ISO zakamuva, kufaka phakathi i-ISO9001: 2015 ne-ISO14001: 2015, ukuze ukwazi ukusebenza nathi ngokuzethemba. Ngokwengeziwe, yonke imikhiqizo yethu ine-CCC, i-CE, i-FCC, i-RoHS, i-Reach, i-WEEE ne-Energy Star, futhi isitifiketi se-UL siyatholakala ngemali ethile.
Ifilosofi yethu yebhizinisi isuselwa ezimisweni eziyisi-4 ezibalulekile - Ubuqotho, Ukuqamba, Ikhwalithi kanye Nensizakalo
Kuyisifiso sethu ukuba ngumkhiqizi oholayo wemikhiqizo yokubonisa emhlabeni, futhi sikholelwa ukuthi sisendleleni yokufeza le nhloso.